နေ့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်, ညဉ့်အခါအနုပညာရှင်: လန်ဒန်မှာရှိတဲ့ Mihov ၏အကျင့်များနှင့် Los Angeles မြို့ - အောင်မြင်မှုပုံပြင်များမဂ္ဂဇင်း
ပုံရိပ်တွေ: Mihov (All rights reserved)
ပြီးခဲ့သည့်2နှစ်များတွင် Mihov ၏ပုံရိပ်သည်ကမ္ဘာ့အနုပညာမြင်ကွင်းတစ်ခုအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ကောင်းချီးကိုလက်ခံရရှိအနုပညာရှင်တစ်ဦးမှလန်ဒန်မြို့၌စင်ကြယ်သောဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များထံမှထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ မိမိအပန်းချီကားများလန်ဒန်နှင့်ရောနှော Los Angeles မှာပြပွဲများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
Mihov, သူ့အနုပညာနှင့်စစ်မှန်သောမိသားစုနာမည်ဖြစ်ပါတယ်ကဲ့သို့, မိမိကိုနိုင်ငံတကာခရီးစဉ်များအတွင်းမှာလှုံ့ဆော်မှုရရှိသွားတဲ့။ မိမိအထဲမှတစ်ဦး ပန်းချီကား ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအကြောင်းကို 15 ကွဲပြားခြားနားသောမြို့ကြီးများ၌ပြစ်မှားမိခဲ့သည်။
နေ့ဒိုင်ညဉ့်အခါအဆိုတော်: သင့်အကြောင်းဆောင်းပါးများကို၌ငါ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်သောအရာအဓိပ္ပါယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီနှစျခုဇာတ်ကောင်များအကြားခြားနားချက်များဘာတွေလဲ?ဒါဟာဖြစ်ကောင်းအမြင်တစ်ခုပုံမှန်မဟုတ်သောအချက်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော့်အမြင်အတွက်နှစ်ဖက်တဦးတည်းကိုမျှော်လင့်မယ်လို့ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားကြသည်မဟုတ်။ အဘယ်အရာကိုလူတွေနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူးသင်ကဘဏ်လုပ်ငန်းအတွက်ဖန်တီးမှုပြဿနာဖြေရှင်းခြင်းနှင့်စိတ်ကူးမျိုးဆက်ပြုကြသကဲ့သို့သင်တို့အနုပညာအတွက်အသေးစိတ်အဖြစ်တာစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း, တွက်ချက်မှုများနှင့်အာရုံစိုက်မှုလိုအပ်တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အမှု၌ဤကမ္ဘာနှစ်ခုကိုတစ်ဦးချင်းစီကတခြား complementing နေကြသည်။
သင်ဘယ်လိုပန်းချီကားကိုစတင်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သင်ပထမဦးဆုံးသငျသညျအနုပညာလုပျခငျြတသဘောပေါက်ခဲ့ကြသည့်အခါ?ငါလေ့လာလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက အနုပညာဒါပေမယ့်လည်းဆရာ, ဆရာမခဲ့ကြသည်နှစ်ခုဖြစ်သော၏ကျယ်ပြန့်မိသားစုထဲမှာ3ချာနှင့်အတူကြီးပြင်းတော်မူပြီးမှ, အဲဒါကိုခက်ခဲလမ်းဖြင့်ငါသိပ်ချစ်လဲဖြစ်ပျက်ရသောသင်္ချာ, ဒါပေမယ့်ဘာမှကိုလိုက်ရန်လုပ်လေ၏။ ငါငြင်းခုန်နိုင်ပါတယ် သင်္ချာ အနုပညာလည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အခြားဆွေးနွေးမှုများအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျွန်မပထမဦးဆုံးရှာဖွေစူးစမ်းစတင်ခဲ့သည့်အခါရေနံပန်းချီအကြောင်းကိုတစ်နှစ်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲအကြာဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အသက်ကိုသက်သက်သာဘဏ္ဍာရေးကိုစွဲလန်းနှစ်သက်သကဲ့သို့ငါအသစ်တစ်ခုဝါသနာနှင့်ဖန်တီးမှုတစ်ခုခုလိုအပ်တူသောငါခံစားရတယ်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးချိန်ခွင်လျှာသပိတ်မှောက်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျွန်မပန်းချီကားကိုခံစားဖို့အသုံးပြုဘယ်လောက်အောက်မေ့ဒါငါသွားပါကအခြားပေးရထင်ထားတဲ့အနုပညာထောက်ပံ့ရေးစတိုးဆိုင်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းနေစဉ်အခါဗဟိုလန်ဒန်မြို့ရှိတစ်ဦးမိုးရာသီနေ့၌ဖြစ်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုနေ့ရက်ကနေ, တကအမှန်တကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာခရီးဖြစ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက်သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပေးထား, သင်ဘဏ္ဍာရေး၏ကမ္ဘာမှအနုပညာအကြောင်းကိုမဆိုလှုံ့ဆော်မှုရှာရမလဲ?ငါဘာသာရပ်များအမျိုးမျိုးကနေလှုံ့ဆော်မှုရှာဖွေဘဏ္ဍာရေးလောကီသားတို့သည်အသိသာသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးငါသည်လည်းငါ၏အအနုပညာဖို့နောက်ခံအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုကိုအသုံးပြုပါ။
နေ့စဉ်ပုံမှန်အနုပညာရှင်၏အတိတ်ထဲမှာသူ / သူမသတိထားမိခဲ့သည့်အတွက်အချိန်ရှိ၏။ သင်တို့အဘို့အကမ္ဘာကိုတံခါးကိုဖွင့်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကဘယ်သူလဲခဲ့သလဲ
အနုပညာဖန်တီးနှင့်ငါ၏ဧည့်ခန်းထက်ကျော်လွန်ပါကပြမှငါ့ကိုအားပေးတယ်သူပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးလည်း Chrom အနုပညာတည်ထောင်သူတဦးဖြစ်ပြီးသူသည်သတ္တုတွင်း၏ညွှန်ကြားရေးမှူးဟောင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါပန်းချီစတင်ခဲ့ပြီးမှကျနော်တို့အနုပညာရဲ့ခေါင်းစဉ်အပေါ်မမျှော်လင့်ဘဲကျွန်တော်တို့ကိုချိတ်ဆက်သောကျပန်းစကားပြောဆိုမှုရှိခဲ့သည်။
အဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့အနုပညာခွဲခြား?ကြှနျတေျာ့အမွငျတှငျ, အနုပညာအခြေခံအဆင့်အပေါ်လေ့လာသူ impact စေခြင်းဖြစ်သည်။ သင်တစ်ဦးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာအနုပညာတစ်ခုအပိုင်းအစထိတွေ့နေတယ်ဆိုရင်, သင်ထားတဲ့စိတ်ခံစားမှုခံစားရစေပါလိမ့်မယ်, သတိထားဖြစ်ဖို့ပျော်ရွှင်အမှတ်ရစရာ, စိုးရိမ်မှုတွေ, ဒါမှမဟုတ်ပင်သင့်ကိုယ်ပိုင်အမှားများသင်သတိပေးတယ်။ အနုပညာတစျဘဝတစျဆငျ့ဝိညာဏသံလိုက်အိမ်မြှောင်အဖြစ်သုံးနိုငျတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ ဤသည်ကပဲဗေဒဒါပေမယ့်နောက်ကွယ်ကစိတ်ကူးသည်မဟုတ်, အစဉ်မပြတ်ငါငါ့အအနုပညာနှင့်အတူအောင်မြင်ရန်ရည်ရွယ်ကဘာလဲ။
တခြားသိသာထင်ရှားတဲ့အဘယ်အရာကိုငါ့အနုပညာကိုကွဲပြားခြားနားသောစေသည်ငါကိုသုံးပါကဖန်တီးခဲ့သည့်အတွက်အခြေအနေတွင်နှင့်နည်းစနစ် / ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအခြေအနေတွင်၏ဥပမာတစ်ခုပေးနိုင်သလား?တစ်ခုချင်းစီပန်းချီကားက၎င်း၏ကစတင်ခဲ့သည့်ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်း, လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်ချမှတ်ခြင်းတစ်မူထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရှိပါတယ်။ ကျွန်မဥပမာပန်းချီ '' Times သတင်းစာများ၏အဆိုးဆုံးမှာပွဲတော်ကြီး '' က၎င်း၏ချမှတ်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတွက်ကမ္ဘာလုံးအနှံ့ 15 ကွဲပြားခြားနားသောအရပ်တို့ကိုမလှည့်ပတ်သယ်ဆောင်လျက်ရှိခဲ့ကွောငျးသငျသညျကိုပြောသည်ခဲ့လျှင်၎င်းသည်တစ်ဦးနန်းတော်၌မှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံများရိုက်ကူးခဲ့ကွောငျး, တစ်ဦး 200 ကီလိုမီတာ / နာရီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအသက်ရှင်ကျန်ရစ် အိန္ဒိယတွင်နီးပါးတစ်ဦးလေဆိပ်မှာဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့် Los Angeles မြို့က Grand ပြည်ထောင်စုဘူတာမှာဥပဒေကြမ်းဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အနောက်ဟောလိဝုဒ်တစ်ပြခန်းအဖြစ်ဖွင့်အဆုံးသတ်တယ်, ငါအဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကြည့်ရှုရန်စတင်။
Times သတင်းစာ© Mihov ၏အဆိုးဆုံးမှာပွဲတော်ကြီး
မြေအောက်ရထား အတွက် Billboard Los Angeles မြို့ နဲ့လန်ဒန်
© Mihov ပန်းချီ
ငါရင်းမြစ်ထားတဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစင်ကြယ်သော 24 ကရာတေးရွှေနှင့်ကျောက်မျက်အရည်အသွေး, ပဋိပက္ခအခမဲ့, စိန်ပွင့်မှုန့်ကဲ့သို့အဖိုးတန်ပစ္စည်းများအသုံးပြုခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့အနာဂတ်© Mihov ဆုံးဖြတ်ခြင်း
ဥစ္စာ၏ပန်းချီကားကိုရွေးချယ်ပါနှင့်၎င်း၏ပုံပြင်ပြောပြပါ။"ကမ္ဘာ့အနာဂတ်ဆုံးဖြတ်ရ" တွင်က၎င်း၏အင်္ဂါရပ်ကတဆင့်မြေပုံပေါ်တွင်ကြှနျုပျကိုသှငျးထားသောအပိုင်းအစခဲ့သည် Forbes မဂ္ဂဇင်းမှ။ အဆိုပါပန်းချီပျောက်အများပြည်သူမျက်စိကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်နှင့် ပတ်သက်. အဓိကသော့ချက်ဆုံးဖြတ်ချက်များတံခါးပိတ်ယူကြသောအခါအသက်တာ၌အချိန်လေးအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအပိုင်းအစလည်း၎င်းတို့၏လမ်းရပါလိမ့်မယ်တဲ့သူအပေါ်တိုက်ခိုက်နေနှစ်ခုဇာတ်ကောင်များအကြားအာဏာရုန်းကန်အပေါ်တစ်ဦးကစားဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖွဲ့စည်းမှုကြောင့်စကားပြောဆိုမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဖို့အတွက်အခန်းတစ်ခန်း၌သင်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့။ ဒါဟာသင်သင်သည်အဘယ်အရာကိုပြုမယ်လို့ကမေးတယ်။
နောက်ခံလည်ပင်းအားဖြင့်တစ်ဦးရန်ဘက်ပြုသောသူညှစ်ခြင်းနှင့်ရှေ့မှာ, ယဉ်ကျေးမှု, ဒါပေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေးလံစကားပြောဆိုမှုမှနှိုငျးယှဉျလို၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုရည်ညွှန်း၏ငါ၏အလမ်းသောမြွေတိုက်ပွဲ Hercules ၏ရုပ်တုပေါ်တွင်လုပ်ပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအကြောင်းအရာအလိုက်ပေးထားသောငါအပိုင်းအစသီးသန့်တစ်အသိကိုဖန်တီးရန်, ခမ်းနားထည်ဝါဖြစ်ခံထိုက်စဉ်းစားမိတယ်။ ယင်း၏ဖန်ဆင်းခြင်းအဘို့ငါရင်းမြစ်ထားတဲ့နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစင်ကြယ်သော 24 ကရာတေးရွှေနှင့်ကျောက်မျက်အရည်အသွေးကိုအဖြစ်တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပဋိပက္ခအခမဲ့, စိန်ပွင့်ဖုန်မှုန့်အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။
သင်သည်သင်၏အနုပညာများအတွက်အခြေခံအဖြစ် semiotics ကိုအသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့ပန်းချီကားအတွက်သင်္ကေတ၏အခန်းကဏ္ဍကိုကဘာလဲ?ကျွန်မဤအရပ်မှအဘယ်ကြောင့်ငါများသောအားဖြင့်အသီးအသီးအပိုင်းအစအတွက်ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ၏တစ်ဦးထက်ပို convoluted လမ်းပိုနှစ်သက်မယ်လို့, ငါ့ပရိသတ်ကိုစိန်ခေါ်ဖို့ကြိုက်တယ်။ ငါသုံးတဲ့သင်္ကေတဟာလေ့လာသူတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းမှတဆင့်ပဲ့ထိန်းခံရဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အနက်ကိုစည်းကြပ်ဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ကိုအာကာသခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအသင်းအဖွဲ့နှင့်နားလည်မှုတစ်ခုအဆင့်ကိုဖန်တီးဖို့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ, '' Fame '' ငါကဘာသာရေးပန်းချီကားများအတွက်အသုံးပြုသည်အဖြစ်အလားတူလမ်းအတွက်ဗဟိုကိန်းဂဏန်းနောက်ကွယ်မှကနေလာမယ့်အလင်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါကဒီနေ့ရဲ့ Instagram ကိုနှင့် selfie ဆုံလည်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကျော်ကြားမှုသစ်ကိုဘာသာတရားကြောင်းကြေညာချက်အောင်ငါ့လမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။
သင့်ရဲ့ပန်းချီကားများမှအများပြည်သူ၏တုံ့ပြန်မှုကဘာတွေလဲ? အဘယျမေးခှနျးမြားကိုသင်နှိုးဆော်ခြင်း?အများအားဖြင့်ကအပိုင်းအစဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်ရပ်နောက်ကွယ်မှလှုံ့ဆော်မှုအကြောင်းပါ။ သို့သော်ကျွန်မအနုပညာနှင့်ဝသကဲ့သို့ငါ၏အပရိသတ်ကိုမေးခွန်းများကိုမေးမြန်းခြင်းခံရဖို့ပိုနှစ်သက်, ကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီထူးခြားသောဘဝအတွေ့အကြုံများအပေါ်အခြေခံပြီးကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိပါတယ်။
"သင်ကနောက်ဆုံးနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း Mihov ၏ရှေ့မှောက်တွင်တည်ထောင်ရန်ယူခဲ့ပါကဘာလဲခြေလှမ်းများ: တိုင်းငယ်ရွယ်အနုပညာရှင်မေးရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းအရာတစျခုမှာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မေးခွန်း?
ငါ၏အမှုကိစ္စများတွင်နောက်ဆုံးနှစ်နှစ်လက်တွေ့စမ်းသပ်ချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့ execute ငါ့စွမ်းရည်တိုးတက်အောင်။
သငျသညျအကြှနျုပျ၏အမှု၌ရှိသကဲ့သို့ရောထွေးမီဒီယာနှင့်အတူပေါင်းစပ်ပြီး start သောအခါအဆီ, ကိုယ်နှိုက်ကလှည်အလတ်စားဖြစ်နိုငျသညျ, တဦးတည်းဖော်ပြထားခြင်းမှ, ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏အချဉ်ဓာတ်, အဆင့်ဆင့်ကိုနားလည်ကော်အမျိုးအစားများကိုစတင်ရန်လိုအပ်ပါသည်ပေမယ့်အနည်းငယ်။
ကျနော်တို့လာမယ့် Mihov ကနေဘာမျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲLos Angeles မြို့ကအောက်ပါငါလန်ဒန်ပြပွဲအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ့်စဉ်အတွင်း Candid ဝိဇ္ဇာ Trust မှမှာ Fusion ခေတ်ပြိုင်အနုပညာကိုပြသပါပြီးစီးခဲ့နှင့် 12-16th ဇူလိုင်လအကြား flux ပြပွဲနှင့်အတူလာမယ့်ပြပါလိမ့်မည်, ငါထက်ပို 70 applications များထဲကရွေးချယ်ထားသော 700 အနုပညာရှင်များတဦးတည်းဖြစ်၏ရသောအဘို့။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှခေတ်ပြိုင်အနုပညာစုဆောင်းဘို့ဖြစ်ဖို့ရာအရပျဖြစ်လာစေရန်နှင့်ထွန်းသစ်စကြယ်ပွဘေးမှာထူထောင်အနုပညာရှင်များလျှပ်စစ်ရောနှောတင်ဆက်ခဲ့သည့်အဆိုပါ flux ပြပွဲ, ဝိဇ္ဇာ၏ကမ္ဘာကျော်ချယ်လ်ဆီးကောလိပ်, ကျောက်ကိုမှာယခုနှစ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည် ယင်းကိုတိတ်ကနေလွှင့်ပစ်။
Mihov မှာ Follow Instagram ကို နှင့် Facebook က
ဆွီဒင်ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဒီဇိုင်နာများတစ်ခုမှာ - Ida Sjöstedtနှင့်အတူမေးမြန်းချက်
နာဆာအကြောင်းကို Nedelcho Laskov
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုကနေဆွီဒင်နိုင်ငံမှ startup အကြံပြုချက်များ - ကို Justin Phelps အင်တာဗျူး
Zanara သူမ၏ပန်းချီကားများအတွက်လူထုပုံပြင်များ, ဒဏ္ဍာရီများနှင့်ဒဏ္ဍာရီများအတွက်သူမ၏စိတ်အားထက်သန်မှုပေါင်းစပ်
အတတ်ပညာ, အနုပညာရှင်, ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်, ဘူဂေးရီးယားအနုပညာရှင်, လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အခြေစိုက်အနုပညာရှင်, Los Angeles မြို့, Mihov, ပန်းချီကား | 04-04-2017 | rating:5/ 30